Ingxelo yeSoDA ka-2013-Umqulu 2 | Martech Zone
NgoLwesithathu, Novemba 6, 2013 NgoLwesibini, Novemba 5, 2013 Douglas Karr
Uhlelo lokuqala lwe Ingxelo yeSoDA ka-2013 ngoku isondela phantse kwi-150,000 yokujonga kunye nokukhuphela!
Inxalenye yesibini yempapasho ngoku ilungele ukujongwa. Olu hlobo lubandakanya ukudityaniswa okumangalisayo kweengcinga zobunkokeli, udliwanondlebe olunengqiqo kunye nomsebenzi wokwenyani owenzelwe iimveliso eziphambili ezinje ngeNike, iBurberry, iAdobe, Ukutya okupheleleyo, iKLM kunye noGoogle. Abaxhasi babandakanya ababhali beendwendwe abaziwayo abavela kwiiblue-chip brand, iingcebiso kunye nokuqalisa okutsha, kunye nezikhanyiso ezivela kwiinkampani ezingamalungu eSoDA kwihlabathi jikelele.
Ubungakanani bomxholo oqulathwe kulo mqulu uphinde ube ngumzekelo. Ubulungu be-SoDA, amaqabane kunye nezinye iinkokheli zeshishini zibonelela ngokuqonda kwabo kutsha nje kwidijithali kunye nemida ephazamisayo yentengiso yedijithali, inkonzo yabathengi kunye noyilo lwemveliso. UTony Quin (uSihlalo weBhodi yeSoDA kunye ne-CEO ye-IQ).
Kule volumu, i-SoDA ikwanethamsanqa lokusebenzisana ne-AOL yeqabane ukuqala ezinye zezinto ezifunyanisiweyo kuphononongo lwayo lokuncipha kweefestile zokuthenga kunye nefuthe lokuphindaphinda lokusetyenziswa kwe-smartphone kulawo maxesha ancitshisiweyo okwenza izigqibo kudidi olubanzi lwemveliso kunye neenkonzo .
Malunga ne-SoDA-Umbutho weHlabathi woLungiso lweNtengiso yeDijithali: I-SoDA isebenza njengothungelwano kunye nelizwi labarhwebi kunye nabaqambi kwihlabathi liphela abenza ikamva lokuthengisa kunye namava edijithali. Amalungu ethu (iiarhente eziphezulu zedijithali kunye neenkampani zemveliso ezikhethekileyo) ziza ngesimemo kuphela kunye nesichotho esivela kumazwe angama-25 + kumazwekazi onke amahlanu. I-Adobe ngumxhasi wombutho weSoDA. Amanye amaqabane ombutho aquka iMicrosoft, i-Econsultancy kunye ne-AOL.
tags: Isoda ka-2013Ingxelo yesoda ka-2013zodakaAOLBurberryUqoqoshoUmbutho weHlabathi woLungiso lweNtengiso yeDijithaliGoogle +IQKLMmicrosoftnikeingxelo yesodaUTony QuinUkutya konke